चेतनाको अभावले नाज्कालाई जोखिममा पार्छ यात्रा समाचार
मरियम | | हाम्रो बारेमा, पेरू
पेरूमा, नाज्का र पाल्पा शहरहरूको बीच, सब भन्दा लोकप्रिय पुरातात्विक रहस्यहरू मध्ये एक अवस्थित छ। यस मरुभूमिमा विशाल भूगोलिफहरूको एक सेट मात्र एक निश्चित उचाइबाट देखिन्छ, जुन पशु, मानव र ज्यामितीय आकृतिहरू गठन गर्दछ। ती नासा संस्कृतिले २०० ईसापूर्व र AD०० एडीको बीचमा सिर्जना गरेका थिए र पुरातात्विकविद्हरूले १ 200 s० को दशकमा अध्ययन गर्न शुरू गरेदेखि यता उनीहरूको उत्पत्ति र अर्थको बारेमा दर्जनौं सिद्धान्तहरू देखा पर्‍यो, यद्यपि तिनीहरू अझै रहस्य नै छन।
नाजका लाइनहरू पेरूको लागि राष्ट्रिय खजाना हुन् र उनीहरू यसलाई जोसका साथ रक्षा गर्छन्। यद्यपि नाजका सबै खतराबाट सुरक्षित छैन। क्षेत्र मा कुनै पनि फुटबल, सामग्री र मौसम को स्थिति को कारण, हजारौं बर्ष सम्म चिन्हित रहन्छ र कुनै पनि वास्तविक क्षति अपूरणीय छ।
दुर्भाग्यवस, हालका बर्षहरूमा ठाउँको संवेदनशीलताको बारेमा जागरूकताको अभावले नाजालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने कार्यहरूको शृंखलामा लग्यो।
1 क्षति नाज्कामा उत्पादन भयो
2 नाज्काका बारे काल्पनिक कथा, यसको उत्पत्ति के हो?
3 नाज्का रेखाले के प्रतिनिधित्व गर्छ?
क्षति नाज्कामा उत्पादन भयो
ती मध्ये नयाँ र सबैभन्दा विनाशकारी गत जनवरीमा भयो, जब यातायात कम्पनीका ड्राइभरले नाजका पाम्पास पहुँच गरे तर संकेतको बाबजुद विपरित चेतावनी दिइयो र भयानक क्षति भयो। लगभग १०० मिटरको क्षेत्रमा पुरातात्विक साइटमा। नतिजा स्वरूप, गहिरो निशान जमिनमा छोडियो कि बालुवामा चित्रित हजारौं वर्ष पुरानो आंकडा मध्ये तीन लाई प्रभावित गरेको छ।
यो व्यक्ति त्यस इलाकाको देशभक्त अवस्थाबारे अनजान थिए र नाज्का पाम्पासमा प्रवेश गरे किनकि उसको गाडीमा टायरको समस्या थियो। यद्यपि, पेरूको संस्कृति मन्त्रालयले रिपोर्ट गरेको छ कि यसले एक बयानमा ड्राइभरको आपराधिक अपमान गर्दछ।
तर नाज्का लाइन्स पहिले नै बिग्रिएको थियो। २०१ 2014 मा, लिमामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको दौरान, ग्रीनपीस संगठनका कार्यकर्ताहरू त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गरे र हम्मिbबर्ड भूग्लिफ भएको ठाउँमा उनीहरूले धेरै विशाल अक्षरहरू राखे। सन्देशको साथ "यो परिवर्तन गर्ने समय हो! भविष्य नवीकरणीय छ। ग्रीनपीस। " केवल आकाश बाट दृश्यमान। कोलाहल पछि, ग्रीनपीस साइट को क्षति को लागी माफी माग्ने कोशिश गरी, जो पहिले नै अपूरणीय थियो।
एक बर्ष पछि, सेप्टेम्बर २०१ in मा, एउटा विषयले स्थान पहुँच गर्‍यो र कुनै एक भूगोलिफमा उसको नाम लेखियो। उक्त व्यक्तिलाई नाज्कालाई बचाउने अभियोगमा जागरणकर्ताहरूले पक्राउ गरेका थिए र मुद्दा चलाइयो।
नाज्काका बारे काल्पनिक कथा, यसको उत्पत्ति के हो?
सुरुमा पुरातत्त्वविद्हरूले नाज्का लाइनहरू केवल साधारण मार्ग मात्र हुन् भन्ने सोचे, तर समय बित्दै जाँदा अन्य सिद्धान्तहरूले बल प्राप्त गरे कि “पूजा गर्ने ठाउँहरू” पहाडका देवतालाई प्रसन्न तुल्याउनको लागि सिर्जना गरिएको हो।
आज हामीलाई थाहा छ कि नाज्का बासिन्दाहरूले सतहबाट ढु stones्गा हटाएर भूग्लिफहरू बनाए ताकि तल सेता बलुआ पत्थर देख्न सकियोस्। थप रूपमा, जापानको यामागाटा विश्वविद्यालयका थुप्रै अनुसन्धानकर्ताहरूलाई धन्यवाद, हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ चार भिन्न प्रकारका आकृतिहरू छन् जुन एउटै गन्तव्यको साथ बिभिन्न मार्गहरूमा समूह बनाउँदछन्: काउआचीको प्रि-इन्का शहर। आज केवल एउटा पिरामिड खडा छ, तर यसको हेडमेडको अवधिमा यो नाजका संस्कृतिको पहिलो दरको तीर्थयात्रा केन्द्र र राजधानी थियो।
जापानी पुरातत्वविदहरुका अनुसार नाज्का चित्रहरु कम्तिमा दुई फरक संस्कृतिले निर्माण गरेको थियो बिभिन्न प्रविधि र प्रतीकहरु संग, जुन भूग्लिफमा देख्न सकिन्छ जुन आफ्नो क्षेत्र देखि काहुआची शहर को बाटो पत्ता लगाउँदछ।
तिनीहरूले यो पनि पत्ता लगाए कि चित्रहरू नाज्का उपत्यकाको नजिकको क्षेत्रमा र त्यहाँबाट काहुआची जाने बाटोमा विशेष रूपमा परिवर्तन भएको छ। त्यो क्षेत्रमा छविहरूको भिन्न शैली छ, अलौकिक प्राणीहरू र टाउकोहरू उनीहरूलाई ट्राफियां भए जस्तो देखाउँदै माथि वर्णन गरियो। दुबै समूहले बनाएको भूग्लिफको तेस्रो समूह नाज्का पठारमा फेला पर्‍यो, जुन दुबै संस्कृतिहरू बीचको आधा बाटोमा छ।
जापानी पुरातत्वविदहरुका अनुसार नाजका आंकडाको प्रयोग समयसँगै परिवर्तन भयो। सुरुमा तिनीहरू पूर्ण विधीका कारणका लागि सिर्जना गरिएका थिए, तर पछि तिनीहरू Cahuachi सम्म पुग्ने सडकको छेउमा राखिए। कसैको धारणाको विपरित, यी तथ्या path्कहरू तीर्थयात्रालाई मार्क गर्न प्रयोग गरिएको थिएन किनकि यो राम्रोसँग चिह्नित हुनुपर्दछ, तर विचारहरू सजीव बनाउन पनि यसलाई अनुष्ठानको भाव प्रदान गर्दैछ।
यद्यपि धेरै व्यक्तिहरूले नाजका प lines्क्तिहरूको अर्थको उत्तर दिन खोजेका छन् र त्यहाँ उनीहरूको उत्पत्तिको बारेमा थुप्रै सिद्धान्तहरू छन्। गणितज्ञ मारिया रेचेले यी चित्रहरूको खगोलीय अर्थ छ भन्ने परिकल्पनालाई हटाएर पल कोसकलाई प्रभावित गरे। पुरातत्वविदहरू रेन्डेल र इस्लाले 650० भन्दा बढी साइटहरू उत्खनन गरेका छन् र ती चित्रहरू उत्पन्न गर्ने संस्कृतिको इतिहास पत्ता लगाउन सफल भएका छन्। यो मरुभूमि भएकोले पानीको आपूर्ति यस क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। रेखांकनले एक धार्मिक परिदृश्यको गठन गर्‍यो जसको उद्देश्य पानी देवताहरूको आह्वानलाई बढावा दिनको हुनुपर्दछ। पुरातत्वविदहरूले तार र दांव पत्ता लगाए जसका साथ यी मानिसहरूले रेखाचित्रहरू पत्ता लगाए।
नाज्का रेखाले के प्रतिनिधित्व गर्छ?
नाजका चित्रहरू ज्यामितीय र प्रतीकात्मक छन्। लाक्षणिक समूहमा हामी जनावरहरू भेट्टाउँछौं: चरा, बाँदर, माकुरो, कुकुर, आईगुआना, छेपारो र सर्प।
लगभग सबै रेखाचित्रहरू समतल सतहमा बनाइएका थिए र त्यहाँ पहाडहरूको भित्तामा केही मात्र छन्। ती मा राखिएको लगभग सबै तथ्या्कहरु को मानव आँकडा प्रतिनिधित्व गर्दछ। केहीलाई तीन वा चार ठाडो लाइनहरूले ताज लगाउँछ जुन सायद एक औपचारिक हेडड्रेसको प्वाइन्टहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ (केही पेरू ममीहरूले सुन र प्वाँख लगाउँदछन्)।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » पेरू » सचेतताको अभावले नाज्कालाई जोखिममा पार्छ
जोरिल्ला ट्रेन, भेलाडोलिड पत्ता लगाउनको लागि भिन्न तरीका